အသစ်ထွက်လာမယ့် MIUI 13 ကို Xiaomi ရဲ့ ဘယ် Device တွေမှာ အရင်ဆုံး ရလာမှာလဲ? — Anycall Mobile
By Naw Htoo Aung November 23, 20202Mins Read
လက်ရှိမှာတော့ Xiaomi User တွေအတွက် အသိချင်ဆုံးအအရာက နှစ်ခုရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ခုက ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ Xiaomi ဖုန်းလေးက Android 11 ရမှာလား ဆိုတာရယ် နောက်တစ်ခုကတော့ MIUI 13 Update ပေးရင် ကိုယ့်ဖုန်းက ရဦးမှာလား ဆိုတာရယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
MIUI 13 က Android 11 ပေါ် အခြေခံမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်ဖုန်းက MIUI 13 ရမယ့်စာရင်းထဲပါနေပြီဆိုရင်တော့ Android 11 မရမှာကိုလည်း စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီးတစ်ခုရှိတာကတော့ ဒီ MIUI 13 ရမယ့်စာရင်းထဲ ကိုယ့်ဖုန်းမော်ဒယ်မပါရင်လည်း အရမ်းကြီးမစိုးရိမ်ဖို့နဲ့ နောက်ထပ် Update Device တွေကို ထပ်ထည့်ပေးသွားမယ်လို့ Xiaomi က ပြောထားပါသေးတယ်။
MIUI 13 ရလာမယ့် Redmi Device တွေကတော့:
MIUI 13 ရလာမယ့် Xiaomi Device တွေကတော့:
MIUI 13 ရလာမယ့် Poco Device တွေကတော့:
MIUI 13 ရလာမယ့် Black Shark Device တွေကတော့
MIUI 13 မှာ ဘယ်အပိုင်းတွေ ပိုကောင်းလာမှာလဲ?
MIUI 13 မှာ ဘယ်အပိုင်းတွေ ပိုကောင်းလာမှာလဲဆိုရင်တော့ Optimization ပိုင်းနဲ့ Animation ပိုင်းမှာ ပိုပြီးကောင်းမွန်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အချက်ကိုတော့ Xiaomi Engineer တွေက အတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ MIUI 13 မှာ ပါလာမယ့် Feature အသစ်တွေကိုလည်း သိရတာနဲ့ နောက်လာမယ့် Article တွေမှာတင်ပေးသွားပါမယ်။
ဘယ်ချိန်မှာ MIUI 13 ထွက်လာမှာလဲ?
ခုလက်ရှိ နောက်ဆုံး Version ဖြစ်တဲ့ MIUI 12 ဟာဆိုရင် 2020 April လမှာ စထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ရှေ့က MIUI 11 တုန်းက ဆိုရင်တော့ 2019 October လ၊ MIUI 10 ကတော့ 2018 June လ၊ MIUI9ကတော့ 2017 August လမှာစထွက်ခဲ့ပါတယ်။ MIUI 13 ထွက်လာမယ့်အချိန်က အတိအကျမဟုတ်သေးပေမယ့် အားလုံးက 2021 အစောပိုင်းမှာ ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။